ရွန္ ယန္း တြင္ ဒုတိယေျမာက္ တ႐ုတ္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို တက္ စ လာ ျငင္းဆို – Pandaily
ရွန္ ယန္း တြင္ ဒုတိယေျမာက္ တ႐ုတ္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို တက္ စ လာ ျငင္းဆို
Feb 15, 2022, 13:48ညနေ 2022/02/15 14:17:53 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံရှိ တက် စ လာ ၏ဒုတိယ စက်ရုံ တည် နေရာသည် အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လတ္တေလာ သတင္းေတြ ထြက္ ေနတာက အေမရိကန္ လွ်ပ္စစ္ ကား ကုမၸဏီကတရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း Shenyang တွင် နောက်ထပ် ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ တစ်ခု တည်ထောင် ပါ-Tesla က ဒါကို ငြင်း ခဲ့တယ်။
လျောင်း နင် ပြည်နယ် ပြည်သူ့ အစိုးရ အထွေထွေ ရုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က တရားဝင် WeChat အများပိုင် နံပါတ် မှ ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံး သတင်း မှဆင်းသက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Shenyang ရှိ Dadong ခရိုင် အား ပြန်လည် ရှင်သန် စေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်အတွက် “ ငါး ဆုပ်ကိုင်” မဟာဗျူဟာ ကိုအဓိက မိတ်ဆက်ထားသည်။
လျောင်း နင် ပြည်နယ် အစိုးရမှ ပဉ္စမ အချက် အနေဖြင့် “ Wenguan in ရိယာ တွင် မြို့ပြ သက်တမ်းတိုး ခြင်းသည် စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နေရာ ပိုမို ကျယ်ပြန့် စေပြီး တက် စ လာ ကဲ့သို့သော စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် စီမံကိန်း အသစ်များ အခြေချ ရန် အုတ်မြစ်ချ လိမ့်မည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤ တိုတောင်းသော မှတ် ချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ တက် စ လာ ၏ဒုတိယ စက်ရုံသည် Shenyang တွင်တည် ရှိနိုင် သည်ဟူသော မီဒီယာ သတင်း များစွာ ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် ထုတ်ဝေသူ က တက် စ လာ သည် Shenyang တွင် အခြေချ မည်ဟု အမှန်တကယ် မပြော သော်လည်း Shenyang သည် စီမံကိန်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆင်းသက် မှုအတွက် အုတ်မြစ်ချ ရန်စီစဉ် နေသည်ဟု အခိုင်အမာ ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် Tesla ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk က အာရှ တွင် Tesla ၏ဒုတိယ စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်များကို ကြေငြာ ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထင်မြင် ချက်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့သည်။ သုတေသီ များက တက် စ လာ သည်တရုတ် ကို နေရာ တစ်ခု အဖြစ်ရွေးချယ် လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ ၏ ပျက်ကွက် မှုနှင့် ဂျပန် နှင့် တောင်ကိုရီးယား ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း ချည်နှောင် ခြင်းနှင့် အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မား ခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
တက် စ လာ သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ အသစ် ၏တည်နေရာ နှင့်ပတ်သက်သော ကောလာဟလ များကို အကြိမ်ကြိမ် တုံ့ပြန် ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ နို ၀ င်ဘာလတွင် တက် စ လာ ၏ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ Tao Lin က တက် စ လာ ၏ဒုတိယ စက်ရုံ တည် နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်း သတင်း အားလုံး မမှန် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တက် စ လာ ၏ တရုတ် ဈေးကွက်တွင် ဝင်ငွေ၎င်း သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃. ၈ ၄၄ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၇. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တရုတ်သည် တက် စ လာ ၏အရေး အပါ ဆုံး ပြည်ပ စျေးကွက် ဖြစ်သည်။ ၀ င်ငွေ သိသိသာသာ တိုး လာခြင်း သည်အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် မြင့်မား ခြင်းနှင့် ရှန်ဟိုင်း ရှိ ကုမ္ပဏီ ၏ကြီးမားသော စက်ရုံ များ သို့ပို့ဆောင် ခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တက် စ လာ သည်တရုတ် နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် လျှပ်စစ် ကား အားသွင်း မှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
တက် စ လာ ၏ ဘာ လင် နှင့် တက္ကဆက် ပြည်နယ် များရှိ စက်ရုံ ကြီးများ ကိုစတင် လည်ပတ် နိုင် ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှန်ဟိုင်း စက်ရုံသည် တက် စ လာ ၏ ပြည်ပ ထုတ်လုပ်မှု၏ ကျောရိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှန်ဟိုင်း ရှိ စက်ရုံ ကြီး ၏ဒီဇိုင်း စွမ်းရည်သည် ယူနစ် ၅၀၀ ၀၀၀ သာ ရှိပြီး လက်ရှိ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် တစ်နှစ်လျှင် ယူနစ် ၄၅၀, ၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှု အပြည့်အ ၀ ရှိသည့် တိုင် ရှန်ဟိုင်း ၏ကြီးမားသော စက်ရုံ တစ်ရုံ တည်း သည် တက် စ လာ ၏ ရောင်းအား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ရန်ခက်ခဲ လိမ့်မည်။ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာ နေသော ၀ ယ် လို အားကို ဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် တက် စ လာ ၏ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် မလုံလောက် သေး သောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် တိုးချဲ့ ခြင်းသည် တက် စ လာ အတွက် ထိပ်တန်း ဦး စားပေး ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တက် စ လာ ၏ ၀ င်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၃၈ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၇. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ကား ထုတ်လုပ်သူ တက် စ လာ ရဲ့ ၁၀-K နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ် ဈေးကွက်မှာ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ဝင်ငွေ ဟာ ဒေါ်လာ ၁၃. ၈ ၄၄ ဘီလျံ အထိ ရှိ ခဲ့တယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) ကို တင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
Cross-border Feb 08 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 8, 2022
Cross-border Sep 07 စက်တင်ဘာ 8, 2021
Cross-border Sep 26 စက်တင်ဘာ 27, 2021